Post-Post Chaos - Soldiers Deployed In Zimbabwe’s Capital
Home 2016 Zimbabwe protests Zim Politics Zimbabwe Zimbabwe Elections Post-Post Chaos - Soldiers Deployed In Zimbabwe’s Capital
10:30:00 2016 Zimbabwe protests, Zim Politics, Zimbabwe, Zimbabwe Elections
Soldiers have been deployed in Zimbabwe's capital Harare to quash protests by opposition supporters who claim that the ruling Zanu-PF wants to rig the presidential election.
7:44pm - The US calls for Zimbabwe to 'use restraint' with protestors. The United States called on Zimbabwean forces to use restraint when dispersing Movement for Democratic Change (MDC) protesters after at least one man was shot dead in Harare during demonstrations Wednesday against alleged election fraud.
7:41pm - Opposition march turns to bloodshed after Zimbabwe vote: The sound of automatic gunfire reverberated through Harare as armoured military vehicles rolled through the Zimbabwean capital and soldiers fired on opposition activists protesting against alleged electoral fraud.
4:55pm - President Emmerson Mnangagwa calls for 'peace' as clashes erupt after poll: President Mnangagwa called for peace as police fired water cannon and teargas at opposition supporters in Harare over alleged fraud in Zimbabwe's elections.
3:51pm - Zimbabwe elections on 'un-level playing field', say EU observers: European Union observers said Wednesday that Zimbabwe's elections had been held on an "un-level playing field" as opposition MDC supporters protested against alleged fraud by the election authority and ruling ZANU-PF party.
Labels: 2016 Zimbabwe protests, Zim Politics, Zimbabwe, Zimbabwe Elections